लगानिकर्ताहरुका लागि खुसिको खबर, अब आउँदैछ प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा नयाँ आईपीओ ! |
Home शेयर बजार लगानिकर्ताहरुका लागि खुसिको खबर, अब आउँदैछ प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा नयाँ आईपीओ...
लगानिकर्ताहरुका लागि खुसिको खबर, अब आउँदैछ प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा नयाँ आईपीओ !
काठमाडौं । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्ति गरेको छ ।
कम्पनीली सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्न बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गरेको हो ।आइतवार कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ढकाल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कम्पनीले कुल १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको २९ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।यो पनि पढ्नुहोस् – काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ ।
आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य ६.५० प्रतिशतले घटेको हो ।साताको पहिलो कारोबार दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८ रुपैयाँले घटेको हो । योसंगै आज कम्पनीको सेयर मूल्य ६९१ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज कम्पनीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ । उक्त दिन कम्पनीको २७ करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । नेप्सेका अनुसार आज कम्पनीको ४ लाख ३ हजार ९९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो ।
कम्पनीले कुल १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको २९ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य ६.५० प्रतिशतले घटेको हो ।
साताको पहिलो कारोबार दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८ रुपैयाँले घटेको हो । योसंगै आज कम्पनीको सेयर मूल्य ६९१ रुपैयाँ कायम भएको छ ।नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज कम्पनीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ ।
उक्त दिन कम्पनीको २७ करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । नेप्सेका अनुसार आज कम्पनीको ४ लाख ३ हजार ९९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो ।